Izihloko zikaKate Zeid ku Martech Zone |
Imibhalo nge Kate Zeid
Kate Zeid, Sawubona DAN I-SVP Yokukhula Nokusebenza: Iqashwe inkampani engumzali ka-Hey DAN i-Civicom ukuletha imikhiqizo emisha emakethe kulo lonke iqembu ngo-2005, u-Kate Zeid uhola ithimba le-Hey DAN lokukhula nokusebenza. U-Kate usebenza kukho konke ukuthuthukiswa komkhiqizo, ukumaketha, isevisi yamakhasimende kanye nethalente futhi uyaqhubeka nokuthuthukisa ukukhula kwemali engenayo ngokutshala imali kuhlobo olulandelayo.
Sawubona DAN: Izwi le-CRM Lingaqinisa Kanjani Ubudlelwano Bakho Bokuthengisa Futhi Ligcine Uphilile
NgoLwesithathu, Novemba 3, 2021 NgoLwesithathu, Novemba 3, 2021 Kate Zeid
Miningi kakhulu imihlangano ongayipakisha osukwini lwakho futhi asikho isikhathi esanele sokuqopha lawo maphuzu okuthinta abalulekile. Ngisho namaqembu angaphambi kobhubhane, abathengisi nabezentengiso aba nemihlangano yangaphandle engaphezu kweyisi-9 ngosuku futhi manje anezindawo zokulala ezikude nezixubene ezisetshenziswa isikhathi eside, amavolumu emihlangano ebonakalayo ayakhuphuka. Ukugcina irekhodi elinembile lale mihlangano ukuze kuqinisekiswe ukuthi ubudlelwano buyathuthukiswa futhi idatha yokuxhumana ebalulekile ayilahleki sekuyinto